एयर फ्रियर रोस्ट टी-हड्डी पोर्क चप, सरल चरणहरू, अत्यन्त स्वादिष्ट सुपर खाना! - समाचार - चेन्हान
एयर फ्रियर रोस्ट टी-हड्डी पोर्क चप, सरल चरणहरू, अत्यन्त स्वादिष्ट सुपर खाना!
नमस्कार, स्वादिष्ट खाना मन पराउने सबैलाई! तपाईं एयर फ्रियरसँग सबै परिचित हुनुहुन्छ, जहाँ फ्राईरको शीर्षमा तातो टाउको छ जुन खाना तताउन घुम्छ। आज म तपाइँलाई सिकाउन जाँदैछु कि कसरी एयर फ्रिरमा टी-हड्डी सुँगुरको चप भुसाउने। यो सजिलो छ, यो सुपर स्वादिष्ट छ!
पहिले २-टुक्रा टी-हड्डी सुँगुरको चोपहरू तयार पार्नुहोस्, पहिले सुँगुरको चपहरू फ्रिन्जहरू ठीक गर्न पहिले चक्कुको प्रयोग गर्नुहोस्, यदि सुँगुरको मासु एकदम ठूलो छ भने, दुबैपट्टि, दोहोर्याइएको मासु हतौडी पोर्क चपहरू हुनसक्दछ, विपरीत पक्षमा प्लगको साथ। सुईको सुँगुरको मासुको मासुमा तरवारलाई डू .्गको मासुको टुक्रामा परिणत गर्नुहोस्, यो चरण बल्ग पोर्क चप्सलाई तताउँदा रोक्नको लागि हो, विशेष गरी जब तपाई फ्राइ pan प्यान प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो चरण विशेष महत्त्वपूर्ण छ। एक कचौरामा, एक चम्मच नुन र आधा चम्मच पेपरिका पाउडर थप्नुहोस्। सुंगुरको मासुको चोपलाई समान रूपमा रग गर्नुहोस्।
समान रूपमा गूण्डिए पछि २ टेबल स्पून तेल तरलको तेल थप्नुहोस् र समान रूपमा घुमाउन जारी राख्नुहोस्। गूण्डिएपछि, यो भण्डारण बाकसमा राख्नुहोस् र एक रातको लागि फ्रिजमा राख्नुहोस्। यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ भने खाना पकाउनु अघि minutes० मिनेट खडा गर्नुहोस्। एयर फ्रिरमा स्टीमिंग र्याक राख्नुहोस् ताकि चोपहरूले तल नछुनुहोस्। र्याकलाई र्याकमा राख्नुहोस् र यसलाई कोट गर्नुहोस्। २० मिनेट को लागी degrees०० डिग्री मा सेट गर्नुहोस्। २० मिनेट पछि, पोर्क चप्स गरियो कि भनेर हेर्न कन्टेनर निकाल्नुहोस्। यदि पोर्क चप्सहरू पहिले नै करीव 70० देखि percent० प्रतिशत पाकिसकेका छन् भने, उल्टाउनुहोस् र बेक गर्न जारी राख्नुहोस्। तरकारी तेल को अर्को परत संग पोर्क चप्स ब्रश र समान तापमान सेट।
तर प्रत्येक एयर फ्रियर फरक छ, ठाउँ फरक छ, त्यसैले तापमान फरक छ, र मासुको प्रत्येक टुक्राको मोटाई फरक छ, त्यसैले सेटिंग समय व्यक्तिगत हो। जब सम्म मासु पकाउदैन तबसम्म पोकाइरहनुहोस्। यहाँ छ एक स्वादिष्ट एयर फ्रायर रोस्ट टी-हड्डी पोर्क चप! साथीहरू, के तपाईंले सिक्नु भयो?
यहाँ गर्न चालहरू छन्! सर्वप्रथम, टि-हड्डी सुँगुरको चोपमा बढी फसिआ हुन्छ, जुन हड्डी नभएको भन्दा नरम हुन्छ, जसले स्फूर्ति दिन्छ। सार्वजनिक अर्डर पछि शब्द हो जुन घरमा स्वाद नुन छैन, पम्पमा प्रकाश थप्न सक्दछ, पाँच मीठो पाउडर, भनिलाको मौसम हुन्छ र यस्तै, व्यक्तिगत अनुसार रुचि राख्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्। अन्तमा, सुँगुरको मासु पकाउनु पर्छ, माथिको समय केवल सन्दर्भको लागि हो।
अघिल्लो:कसरी हावा फ्रियर सफा गर्ने
अर्को:म कसरी एयर फ्रायर प्रयोग गर्दछु